Izibalo Ezihlanganisiwe Zingakuqondisa Okungalungile | Martech Zone
Izibalo Ezihlanganisiwe Zingakuqondisa Okungalungile
NgoMgqibelo, Disemba 8, 2012 NgoMgqibelo, Disemba 8, 2012 Douglas Karr
Sekuyiminyaka ecishe ibe ngama-20 selokhu ngaqala ibhizinisi lezindaba. Ngiyabonga ngamathuba angibeka phambili kubuchwepheshe bokumaketha besizinda emuva ngaleso sikhathi. Ngiyabonga futhi ukuthi sithole ngokushesha i-database yezimayini. Amathuluzi amaningi ngaleso sikhathi asinikeze izibalo ezihlanganisiwe kuyo yonke i-database. Kepha lezi zibalo ezihlanganisiwe zingakusiza ungahambi kahle.
Ngokubukwa okuhlanganisiwe kwamakhasimende ethu, singathola ukuthi iphrofayili yamakhasimende ethu ibingokobulili obuthile, ubudala, imali engenayo futhi ihlala endaweni ethile. Ukumaketha kuleyo ngxenye, singabuza amakhaya kulabo abathize. Isibonelo kungaba ngamadoda, aneminyaka engama-30 kuye kwengu-50, anemali engenayo yasekhaya engaphezu kuka- $ 50k. Singaqhubekisela umkhankaso kulezo zilaleli ngeposi eliqondile ngabendlu nephephandaba ngesifunda futhi sizoqinisekisa ukuthi sizoshaya wonke umuntu kulowo mbuzo.
Njengoba amathuluzi wokubika nokwahlukanisa aqina, sikwazile ukumba ngokujulile. Esikhundleni sokubheka yonke i-database, ngokuzumayo sakwazi ukuhlukanisa i-database futhi sathola amaphakethe we-personas ayengamathuba amahle. Isibonelo, isibonelo esingenhla singase singanaki omama abangabodwa abanemali engenayo engaphezu kuka- $ 70k ebhalwe ngaphezulu njengekhasimende elingenzeka. Yize sonke sinobuntu obufanayo, iqiniso ukuthi akekho kithi ofanayo.
Ekumaketheni okuku-inthanethi, okulingene kuyisici esisodwa. Abanye benu banamathemba okuthanda ukubuyekezwa… abanye abathanda ukufunda, abanye abathanda ukwabelana ngezithombe, babuke amavidiyo, kanti abanye bathanda ukuchofoza kwisaphulelo esihle lapho bekubona. Asikho isixazululo esisodwa esizofinyelela kuwo wonke amathemba akho ngakho ukwehlukanisa isu lakho kuma-mediums kuzokhiqiza imiphumela engcono. Futhi-ke ukumaketha kwemigudu eminingi phakathi kwabasebenzeli bakho kuzoholela emiphumeleni emikhulu.
Ngaphakathi kwalezi zindlela zokuxhumana, kungenzeka ukuthi ukhuluma nesegmenti ehlukile - ngakho-ke udinga ukuzama nokuhlola ukunikezwa okuhlukile nokuqukethwe. Okuthunyelwe kwebhulogi kungaba kuhle kakhulu uma kufundisa futhi kunikeza ukuqonda ukuthi amakhasimende awusebenzisa kanjani ngempumelelo umkhiqizo wakho. Kepha ividiyo ye-YouTube ingasetshenziswa kangcono ngokufaka ubufakazi bamakhasimende. Isikhangiso sesibhengezo singenza kangcono ngesaphulelo.
Kungakho ukumaketha oku-inthanethi kuyinkimbinkimbi kangaka. Ukugcina umkhiqizo ongaguquguquki nemiyalezo kuyo yonke imithombo yezindaba, ngenkathi kusetshenziswa amandla emidiya ngayinye, nokukhuluma ngqo nama-personas ahlukahlukene kudinga ithani lomsebenzi. Akwanele ukubona ukubuka okukodwa kwamakhasimende akho… kufanele ungene ngokujulile kulowo nalowo osebenzelana nawo futhi unqume ukuthi uluhlobo luni lomuntu ofinyelela kulo. Ungase umangale.
Tags: izibalo ezihlanganisiweisilinganisoiphrofayili yekhasimendeizimayini databaseyezimayiniabantuizibalo